आजदेखि रु. १०० दरको नयाँ नोट प्रचलनमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ दरका नयाँ नोट मंगलबारदेखि प्रचलनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ओ/१८०००००१ देखि क/३७ ९९९९९९ सम्मका संकेत नम्बर भएका रु. १०० दरको नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको हो । नयाँ नोटको अग्र भागमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र छ भने मध्यभागको पृष्ठभूमिमा नेपालको नक्सा छ । नयाँ नोटमा अशोक स्तम्भको चित्रका साथै...
दसैँका लागि कहाँ–कहाँ साट्न पाइन्छ नयाँ र सुकिला नोटहरु (हेर्नुस् सूचीसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बडादसैँ पर्वलाई लक्षित गरी आवश्यक साना दरका नयाँ तथा सुकिला नोट सटहीका लागि काठमाण्डौसहित देशभर विभिन्न स्थान तोकेको छ । राष्ट्रबैंकले यही असोज १० गतेबाट असोज १७ गतेसम्म रु. ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ तथा सकिला नोट सटही गर्दैछ । त्यसका लागि राष्ट्रबैंकले विभिन्न स्थान तोकेको हो । राष्ट्रबैंकको मुद्रा...